६० कटेपछि कक्षा १- फिचर - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २, २०७६ प्रतीक्षा काफ्ले
स्याङ्जा — उमेर ६२ । कक्षा १ । ल।क्ष्मीदेवी उपाध्याय पुतलीबजारस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयकी नियमित विद्यार्थी हुन् । पुतलीबजार नगरपालिका-७, अर्चलबोटकी उनले भनिन्, ‘सानो उमेरदेखिको पढ्ने इच्छा बल्ल पूरा गर्दै छु ।’
पुतलीबजार नगरपालिका-७, अर्चलबोटकी उनी वैशाख ८ गते विद्यालयमा भर्ना भएकी हुन् । उनीसँगै ठूलाडिहीकै ५८ वर्षीया भीमकला रेग्मी पनि पढछिन् । लक्ष्मीदेवीबाटै प्रेरित भएर विद्यालय आउन थालेको उनले बताइन् । भीमकला विद्यालय जान थालेको एक साता नाघेको छ ।
लक्ष्मीदेवीका ३ छोरी, २ छोरा र ६ नातिनातिना छन् । ‘म सानी छँदै बाबुआमाको मृत्यु भयो, ४ जना भाइबहिनीको जिम्मेवारी आफैंमा सर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘भाइबहिनीदेखि छोराछोरीसम्मलाई पढाएँ । मेरै इच्छा भने मनमै बिलाएको थियो ।’ श्रीमानको ०६२ सालमा मृत्यु भएर एक्लिएपछि उनमा पढ्ने इच्छा झन् बढ्यो । उनका छोराछोरी जागिर खान्छन् ।
दुईवटा भैंसी पाल्दै आएकी उनले तरकारी खेती पनि गर्थिन् । खेती गर्न नसक्ने भएपछि विद्यालय भर्ना भएको उनले बताइन् । ‘केटाकेटीसँग जिस्कँदै/कराउँदै आमा बनेर गाली गर्दै पढ्नुको मज्जा छुट्टै हुँदो रहेछ,’ लक्ष्मीदेवीले भनिन् । लक्ष्मीदेवी बिहान १० बजे विद्यालय जान्छिन् र १ बजे घर फर्किन्छिन् । ‘घरमा खासै काम छैन, समय कटाउन पनि गाह्रो भएको थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘दिनभरि कक्षा लिन्छु । बेलुका सबै काम सकेर होमवर्क गर्छु । अनि सुत्छु ।’
एसईई दिने उनको लक्ष्य छ । ‘सुरु-सुरुमा लाज लागेको थियो, पछि हौसला बढदै गयो,’ उनले भनिन्, ‘छोराछोरीसँग गुनासो गर्न नपरे पुग्छ । नातिनातिनालाई कखरा चिनाउने लक्ष्य मेरो छ ।’ नातिनातिनासरहका विद्यार्थीसँग पढदा रमाइलो हुने उनको भनाइ थियो । उनी एबीसी, कखरा, एक, दुई, तीन, जोड-घटाउ राम्रोसँग गर्न र भन्न सक्ने भइसकेकी शिक्षिका शान्ता रेग्मीले बताइन् ।
भीमकलाको घर स्कुलसँगै जोडिएको छ । ‘बिहानै छिट्टै आउँछ र बेलुकासम्म पढ्ने गर्छु,’ उनले भनिन् । ३ छोरा, १ छोरी, १ नातिनीकी हजुरआमा भइसकेकी भीमकलाको पढेर नाम लेख्ने, मोबाइल फोन चलाउने, मोबाइलमा रिचार्ज गर्ने, आफैंले डायल गरी फोन गर्ने लक्ष्य छ ।
‘छोराछोरीले हामी पढेर माथि पुगिसकेम् हजुर अब स्कुल नजानुस् बेइज्जत हुन्छ भनेर गाली गर्छन्,’ भीमकला भन्छिन्, ‘उनीहरूको अगाडि पढ्न पनि सर्म लाग्छ । ठूलो कक्षा पढ्ने इच्छा त होइन, जमनाअनुसार चल्नुपर्छ भनेर सिक्न खोजेकी हुँ ।’ ९ वर्षपहिले श्रीमानको मृत्यु भएपछि घरमा एक्लै भएकाले पढ्न मन लागेको उनले सुनाइन् । लक्ष्मीदेवीले भने घरपरिवारबाट राम्रो सहयोग पाएको बताइन् ।
‘उहाँहरू उमेरले आमा हुनुहुन्छ तर पढ्न मन निकै गर्नुहुन्छ,’ शिक्षिका रेग्मीले भनिन् । लक्ष्मीदेवी र भीमकला पढ्न थालेको देखेर अरू महिला पनि विद्यालय आउने तयारीमा रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक चिरञ्जीवी लम्सालले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०९:१६
३ बालबालिकामा डेंगु संक्रमण
जेष्ठ २, २०७६ प्रदीप मेन्याङ्बो
सुनसरी — डेंगु रोगले एकै वडाका तीन जना बालबालिका संक्रमित भएको फेला परेका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख रामबाबु यादवका अनुसार ७, १० र १४ वर्षका ती बालबालिकाको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ ।
ती मध्ये १४ वर्षीया बालिका बगरकोटका हुन् । १० र ७ वर्षका २ जना बालक पुष्पलाल मार्गका हुन् । प्रतिष्ठानको बालरोग विभागका डा. अरुणकुमार सिंहले आकस्मिक कक्षमा ल्याइएका बालबालिकाको रगतको ल्याब परीक्षण गर्दा डेंगु भएको पुष्टि भएको बताए ।
एक्कासि ज्वरो आउने, पेट दुख्ने र उल्टी आउने हुन थालेपछि बिरामीलाई अस्पताल लगिएको हो । उनले डेंगु प्रकोप गाउँघरमा भन्दा सहरमा बढी देखिन थालेको बताए । प्रतिष्ठानका सहायक अस्पताल निर्देशक डा. विकास साहले बिरामीको रगत जमाउने तत्त्व प्लेटलेट्सको अत्यधिक कमी भएको लक्षण देखिएपछि उपचार सुरु गरिएको बताए ।
उनका अनुसार स्वस्थ मानिसका रगतमा प्लेटलेट्सको संख्या डेढ लाखदेखि ३ लाखसम्म हुन्छ तर डेंगु हुँदा शरीरको रगतमा प्लेटलेट्सको संख्या २०, ३० हजारमा झर्छ जसले गर्दा रक्तस्राव पनि हुन सक्छ ।
जमेको सफा पानीमा बस्ने ‘एडिस एजिप्टाइ’ जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेंगुको संक्रमण देखिन थालेपछि प्रतिष्ठानको प्राविधिक सहयोगमा उपमहानगरपालिकाले बुधबारदेखि प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरी औषधि छर्कन सुरु गरेको छ । प्रमुख यादवले धरान-१५ बाझगराको एभरेस्ट लाइन, पाथिभरा लाइन, पिण्डेश्वर चोक, पुष्पलाल मार्ग, देवकोटा चोक, बुढासुब्बा चोक, सदन मार्ग, ध्रुवज्योति पथ र चेम्जोङ पथलगायतमा औषधि छर्किएको बताए ।
डेंगुको जाँच र उपचार प्रतिष्ठानमा हुन्छ । चिकित्सकहरूका अनुसार डेंगुको मुख्य लक्षण एक्कासि उच्च ज्वरो आउनु हो ।
प्रतिष्ठानका माइक्रो बायोलोजी विभागका एडिस्नल प्रोफेसर डा. नारायण भट्टराईले डेंगुको ज्वरो ५ देखि ७ दिनसम्म रहन सक्ने र ज्वरोका साथसाथै आँखाको गेडी तथा टाउकाको पछिल्लो भागमा धेरै दुख्ने, शरीर दुख्ने, बिमिरा आउने र रक्तस्राव हुने लक्षण देखिने, जोर्नी, हड्डी तथा मांसपेशी दुख्ने पनि भएकाले सतर्क रहनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०९:१४